ဗွားဒေါ်နှုတ်ထွက်ပေးပါ… Out | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ဗွားဒေါ်နှုတ်ထွက်ပေးပါ… Out
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 16, 2015 in Opinions & Discussion | 15 comments
ဟုတ်တယ်.. ဗွားဒေါ် ဥက္ကဌ နေရာမှ နှုတ်ထွက်ပေး ရမည်။ ထွက်သင့်တာ ကြာပြီ.. အားနာသလိုလို ခင်သလိုလို ဝေဝေဝါးဝါး ဖြစ်နေဒေါ့ပရိတ်သတ် ဘာလှုပ်ရမှန်း မသိ။ မြန်တျန့်တွေဗျ… အကင်းမပါးလို့ စစ်ကျွန် ရာစုနှစ်တဝက် ခံနေဒါ။ ချက်ကနဲ ခေါင်းထဲလာဘ် မသွားဘူး။ တုံးအတယ်.. အတ္တကြီးတယ်.. ခွင်လေးနဲနဲမိရင် ကိုယ်ကျိုးစွန့် လှုပ်ပေးနေတဲ့ တပ်ဦးက ကျောင်းသားကိုတောင် အမနာပ ပြောဖို့ ဝံမလေးဗူး။ တိုက်ရိုက်ပြောမှ နားလည်တဲ့ အူကြောင်ကျားမျိုး…။
ဘာမို့နှုတ်ထွက် ပေးရမလဲ..။ အချိန်တန်လို့ ဆိုကြပါစို့။ မပြောမဆို မတီးမမြည် ဆိုသလို လူမိုက်စဂါးပြောမှပဲ သိမယ်ဆို အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီး ကြောင်သူတော်မဟုတ်… ဤနေရာကနေ လည်မော့ ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တောင်းဆိုတယ်…. နှုတ်ထွက်ပေး..။
တိတ်တိတ်နေ ထောင်တန် အတိတ်မှာထားဂဲ့။ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း အိပ်ယာလိပ် ဆွဲပြန်သွားတဲ့ တီလှုပ်ကျီးနဲ့အတူ ပါသွားပီ။ အဂု အချိန်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမှ ရတော့ မည်။ ဥပမာ… ကျမ အတွက်မှားခဲ့ပါတယ်ရှင်၊ တောင်းပန်ပါတယ်.. ဒါပေမှဲ့ ဒါပဲလှုပ်တတ်လို့ ရွေးဂေါက်ပွဲ ထပ်ဝံပါရစေ.. အဲလို တာဝံယူ စကားပြောခြင်ပြော..။ ဒါမှ မဟုတ်.. အာဏှာရလျင် ဘယ်လို မူဝါဒနဲ့သွားမည်.. ပြည်တွင်းရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး ဘယ်လို ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှာလဲ နှုတ်က ပီပီသသ ပြောပြပါ။ ထဲထဲဝံဝံ မပြောချင်တောင် ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုသဘောထားမည် တိတိကျကျနှုတ်ကနေထွက်ပေးပါလို့ ဒီနေရာက ပြောခြင်တယ်..။
ငါကွ ကြောင်ကြီး (နှာယက – ABSDCAT)
သိုင်းပြောင်းပြန် ကျင့်နေတာ ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီ လဲ
အကင်းမပါးတဲ့သူတွေ ဆိုတော့ နှုတ်ထွက်လည်း နားလည်မယ်မထင်ပေါင်
ဟှ နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာ…
နိုင်ငံရေးတောင်မှ… ပိုက်ဆံရလို့ ဟိုနား ဆန္ဒပြရာ ပါ..
ဒီနား စုဝေးရာ ပါ… နဲ့… အဆင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး မျိုး လုပ်နေတာ မဟုတ်ဖူး။
အခု အမေတို့ လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးက အင်မတန် သိမ်မွေ့သော…
အင်မတန် ပညာ သုံးရသော…
အင်မတန် သတိကြီးကြီး ထားရသော…နိုင်ငံရေး လုပ်ကွက်တွေ လုပ်နေတာ..
အဆင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေလို အားတိုင်းယားတိုင်း ကွိစိကွစ ထပြောနေရမယ်လို့ ထင်သလား ။ ဟမ်…
ကျားငစဉ်းလှဲတွေနဲ့ သူသေကိုယ်သေ ပူးသတ်နေရတာ…
.မြေခွေးလို ဝံပလွေလို ကောက်ကျစ်သားရဲတောမှာ မိန်းမသားတစ်ယောက်ပဲ မားမားရပ်ပြနေရတာ…
.လုပ်ချင်တာတွေ ဘယ်လောက် ရှိရှိ…
လုပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေ ဘယ်လိုရှိရှိ…
.ပြောချင်တိုင်း ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ ထုတ်ပြောနေလို့ရမလား…
ဘာပြီးရင် ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်…အဲ့ကျ…ဘာလုပ်မယ် ဆိုတာမျိုး..
အူးကြောင် သိအောင် ပြောရမယ်တဲ့လား
အမေတို့ မူ အမေတို့လူ ကြားမှာ
အမေတို့ လှမ်းမယ့်ခြေလှမ်း ဟန်ချက်က ဘယ်လိုမျိုး
ဘယ်ကို ရောက်မယ်/ မရောက်ဘူး..
ဘယ်ကို ရောက်ရင် ဘာဆက်လုပ်မယ်…
ဘယ်ကို မရောက်ရင်…ဘာထပ်လုပ်မယ် ဆိုတာတွေ… မရှိဘူးလို့ အူးကြောင် သေချာသိလို့လား…
အမေတို့ အရိပ်အခြေကို အူးကြောင် သိတာတွေ အများကြီး
ဒါမယ့် အူးကြောင် မှတ်ထားပါ …
အူးကြောင် မသိတာတွေလည်း အများကြီး
အူးကြောင်တို့လို ကြောင်တွေ မသိစေချင်လို့ ထုတ်မပြသေးတာတွေလည်း အများကြီး
ဒါပဲ။ အဲ့ဒါကိုရော လက်ခံသလား ဦးကြောင်။
.အူးကြောင် က ဘေးထိုင် ဘုပြောပဲ…
ဘုပြောနေမယ့်အစား ”ဘာ”လုပ်ပေးနိုင်သေးလဲ… စဉ်းစားပါအုန်း ။
.ပြိုင်တူတွန်းရင် ရွေ့ပါတယ်။ ဘုပြောနေမယ့်အစား တတပ်တအား လာတွန်းပေးလှည့်စမ်းပါအုန်း ။ လေနဲ့ တွန်းမနေနဲ့ အူးကြောင်…
ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ဘဲ ဘု ပြောနေရင်… ဘင်ဂါလီတွေနဲ့အတူ သွားနေ
အဲ့ဒိအတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ လွတ်လပ်တဲ့ အခါမှာလဲ ယိုးဒယားပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား၊တူရကီပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား၊ အိုင်ယာလန်ပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား၊ ယူနိုက်တက်စတိတ် အမေရီကလိုဖြစ်ချင်သလား၊ အင်္ဂလိပ်ပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား၊ဆိုဗီယက် ယူနီယံလို ဖြစ်ချင်သလား ဖြစ်ချင်တာတွေအပေါ်မှီပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ အလုပ်မလုပ်ပဲနဲ့တော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အလုပ်မလုပ်ပဲနဲ့တော့ မဖြစ်ဘူး…………”
အဲဒီမိန့်ခွန်းရှည်ကြီးမှာ.. တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုသွားစေချင်တယ်.. ဘယ်လိုလုပ်ကြရမယ်စသဖြင့်ပါတယ်..
ဒေါ်စုကတော့.. အောက်စဖို့ထွက်..။ ယူအက်စ်နိုင်ငံရေးနဲ့နီးစပ်သူမို့.. စိနပြည်လို.. အရင်းရှင်ကွန်မြူနစ်လမ်းတော့ လျှောက်မယ်မထင်..။
တကယ်ကို..သိချင်နေသူတွေထဲ.. စိနပြည်က.. ကွန်မြူနစ်ပါတီ..။
ယူအက်စ်က.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်နဲ့.. အခုအိမ်ဖြူအစိုးရဖြစ်နေတဲ့.. အိုဘားမားတို့ပါတီလည်းပါမယ်..။
ဒါမှ.. သူတို့ကလည်း.. ဘယ်လိုဆက် ၂ပါးသွားရမှာကိုသိမှာဖြစ်လို့ပါ..။
သူ ထွက်ပါပြီ တဲ့။
ဘယ်သူတွေ က ဘယ်လို မူဝါဒ တွေ နဲ့ ဆက်လုပ်ကြမယ်တုန်း။
လူသိ လူတတ် သီဝရီ ဘဲရွတ်၊ လက်တွေ့ကွင်းထဲ ကျ
ဆင်း မကန် နိုင်/ ရဲ/ တတ် ကြသူ တွေ နဲ့ဟုတ်နေတော့တာဘဲ။
ဒါမှ မဟုတ်.. အာဏှာရလျင် ဘယ်လို မူဝါဒနဲ့သွားမည်.. ပြည်တွင်းရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး ဘယ်လို ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှာလဲ နှုတ်က ပီပီသသ ပြောပြပါ။ ထဲထဲဝံဝံ မပြောချင်တောင် ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုသဘောထားမည် တိတိကျကျနှုတ်ကနေထွက်ပေးပါလို့ ဒီနေရာက ပြောခြင်တယ်..။
ကကြောင်ကြီးက.. အရီးလတ်တွန်းပို့နဲ့.. ဒေါ်စုအာဏာရလာရင်ဆိုတဲ့အထိ.. လက်ခံလိုက်လာပြီဗျ…
သူဆိုလိုတဲ့နှုတ်ထွက်က.. အပေါ်က ကုဒ်ထားတဲ့အတိုင်း…
သူ ဒီလောက် ရုန်းခဲ့လို့ ဟိုဘက် က ဒီ လောက် တပ်ပျက် နေတာ မြင်နိုင်သားပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီ အခြေအနေမှာ အာဏာရဖို့ စိတ်မချ ရသေးပါ ကိုကို တို့ ရယ်။
Box ထဲ က ထွက်ပြီး အပြင် က နေ ဟို ဘက် ဒီ ဘက် အားလုံး မြင် အောင် ကြည့်ကြပါ။
မူဝါဒ တွေ ပြောချင်တိုင်း ပြောဖို့ နေနေသာတာ လူ တွေ ကို မနဲ စည်းထဲ သွင်း နေ ရတာ ကို မြင်နိုင်တယ်။
တစ်ချက် စည်းဖောက် မိရင် အားလုံး သူတို့ လက်ထဲ ပြန်ပါသွားလိမ့်မယ်။
. လောလောဆယ်မှာ နိုင်ငံပြင်ပ က ရှင်တို့ သာ မူဝါဒ တွေ နဲ့ အော်ပြီး နားလည်မယ်။
. နိုင်ငံ ထဲ က ဘယ်သူ တွေ လဲ ဆို တဲ့ လူ ဘဲ ကြည့်နိုင်သေး တယ်။
သူ့ဟာ သူ ဘာ မူဝါဒ ဖြစ်ဖြစ် လောလောဆယ်တော့ “မှ တစ်ပါး အခြားမရှိ”။
မူဝါဒ မကြိုက်တော့ ရော ဘယ်သူ့ ကို ပေးမှာလဲ။
ဒါကိုမှ အာရုံမပြု နိုင်ရင် နောက် မှ လွတ် တဲ့ငါး ရဲ့ တန်ဖိုး က ပိုကြီး သွားမယ်။
နဲနဲ လေး စိတ်ရှည်ပြီး သပ်ရှို ဖို့ မကြိုးစားသေးဘဲ စည်းလုံးမှု ပြပေးကြပါဦး။
ကျွန်မ တော့ သူ့ ကို ယုံ တယ်။
အနောက်တိုင်း နိုင်ငံရေး ဂုရု ဆရာသမား များ မှာလဲ အားနည်းချက် တွေ အများကြီး။
. မြန်မာပြည် ထဲ မှာ တော့ ဒီလို အပြစ်ထောက်လို့ မရ သေးဘူး။
. မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ ဖြစ်သွားမယ်။
Sorry … I seee … :-)))
ဒါက..နောက်နှစ် ၂၀၁၆နိုဝင်ဘာ ဒုတိယပါတ်ရဲ့အင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဟီလာရီကလင်တန်ရဲ့.. တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအပေါ်ထားတဲ့.. ပေါ်လစီ..။
Hillary Clinton, the Democratic presidential candidate and former secretary of state, will deliveramajor speech on economic policy on Monday, laying out in more detail her diagnosis of went wrong with the economy and, in broad strokes, how she will approach fixing it, the campaign says.
She will make clear, according toacampaign official, that she doesn’t believe wage stagnation and growing inequality are simply facts that we have to live with, caused by trends outside our control. Rather, she will say that the U.S. has the power to change these patterns if we make the right policy choices.
Here are seven ways to understand why Clinton is making the case.
(1) Clinton’s top goal is raising median incomes
(2) She believes policy can help raise worker pay and reduce inequality
(3) In particular, she is looking to boost women’s pay
(4) And Clinton is looking to make sure more women are in the workforce
(5) Clinton believes the federal minimum wage should be lifted
(6) And she believes tax policy changes that favor the wealthy are misguided
(7) She also wants to make corporations, particularly on Wall Street, more focused on long-term returns
ကြောင်ကြီးကို ၀န်းရံကြ ပြီးရင် မဆလာနဲ့ချက်စားမယ်။
တော်သလိုကျိလုပ်ကြတာပေါ့အေတို့ရယ်…. ဒါက ဘွားဒေါ်ဝါးရဲ့ နှုတ်ထွက်
အိပ်ချင်တဲ့သူက နှိုးရခက်သလို သိသိကြီးနဲ့ ပြောဆိုတတ်တဲ့သူကို တုန့်ပြန်ရခက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဟာ့ကို သွားစေချင်တဲ့လမ်းကြောင်း မူဝါဒတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း ချပြပေးပါလား ဦးကြောင်။
ဦးကြောင် ဘာတွေ ပြောပြော အရီးပြောသလို ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ရမဲ့လူဟာ နှစ်ဦးမရှိဘူး။ လူထုခေါင်းဆောင် ကလည်း အကျိုး မဲ့ အကြောင်းတရားတွေ ကြိုမြင်လို့ ချမပြသေးတာလို့ ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီ ယုံကြည်မှူ ကလည်း နှစ်ခုမရှိဘူး။
ကလေးမလေးက ဘာလုပ်မလဲ ဘယ်လိုလဲမေးတော့
အချို့ကိစ္စတွေက ကြိုပြောစရာမလိုဘူး တဲ့
အခုလဲ နူတ်နဲ့ မထွက်ဘူး နောက်ကွယ်က လဲ ပုန်းမနေဘူး
ဟိုတုန်းကတော့ နှုတ် ထွက် စေချင်တယ်။
တကယ်တော့လည်း နှုတ်မထွက်ပဲ Chess ကစားသလို တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အကွက်မှန်းပြီး ပညာပြိုင်ကြတာ ပိုကောင်းတယ်။
ကိုယ်လိုအူကြောင်ကျားမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ စောင့်ကြည့်၊ အချိန်တန်တော့ သိလိမ့်မယ်။